Ny Fandraisana Diso, Ny Fandikana Diso Ary Ny Fampiasana Diso ny ‘Aspie’ Ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Ny Fandraisana Diso, Ny Fandikana Diso Ary Ny Fampiasana Diso ny ‘Aspie’ Ao Japana
Voadika ny 19 Mey 2017 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Nederlands, 日本語, Español, Português, Italiano, English
Asupe, tenin-jatovo Japoney milaza ny aretin'i Aspergers. Avy amin'ny sary ôrizinaly nozaraina betsaka tao amin'ny media sosialy .
Nisy antsafa iray vao haingana niarahana tamin'ny mpamorona manga Japoney malaza iray nanolotra ny topimaso momba ny fomba handraisana ny teny hoe “Asperger” izay sady tsy dia fantatra loatra ao Japana no sady ampiasain'ny karazana kolontsaina Japoney ao amin'ny aterineto ihany koa mandritra izany.
Tany am-piandohan'ny volana Aprily, tao anatin'ny antsafa niarahana tamin'ny tranonkalan-kolontsaina pop Niconico ao Japana, nanao fanehoan-kevitra amin'ny tarehin-tsoratra aretin'i Asperger ao anaty sarimiaina sy manga ilay mpamorona manga malaza Yamada Reiji (山田玲司).
Fikorontanan'ny atao hoe autism spectrum hita ao amin'ny iray isanjaton'ny mponina Japoney ny aretin'i Asperger. Yamada Reiji no mpamorona ny andian-tantara manga tsy avy amin'ny hay-famoronana antsoina hoe Zetsubō ni Kiku Kusuri ( ‘Fanafody amin'ny Famoizam-po’). Nilaza izy fa ataon'ny ny aretin'i Asperger ho tonga lafatra ny mpandray anjara fototra ao amin'ny manga sy ny sarimiaina:
… Mba hilazana ny marina, vao roa-polo taona lasa teo ho eo izay no nilazana ny olona ho “hafakely” kokoa rehefa hita tamin'ny fitiliana momba izany ny olona iray.
Eto amin'ilay antsoina hoe ny “Maherifo Asperger ” isika izao raha mbola tsy azoko antoka raha tena aretina tokoa izy ity na fahasembanana fa miankina amin'ilay mpitsabo manam-pahaizana manokana iresahinao ihany izany.
Araka an'i Yamada, mpandray anjara fototra mahaliana ireo olona voan'ny aretin'i Asperger satria manana fomba fihevitra ambony izy ireo ary “mahay mandalina sy manana tsindrimandry” ihany koa, kanefa tsy manana fihetseham-po :
Raha miresaka mikasika ny tena toetra mampiavaka ny olona miaina miaraka amin'ny Aspergers amin'ny ankapobeny, dia faran'izay mahay tokoa izy ireo, toy ny : fananana hevitra miavaka, ny fahaizana mandalina, ny lojika sy ny tsindrimandry. Azo antsoina hoe “manam-pahaizana” mihitsy aza izy ireo.
Na izany aza, tsy manana fihetseham-po ny olona voan'ny Aspergers. Satria noho izy ireo miaina ao anatin'ny tontolo azy samirery, sy sarotsarotiny be loatra, ka mahatonga azy ireo hampangorovitsika ny olona.
“Ny maherifon'ny Asperger ” manana endrika miavaka
Ireo mpandray anjara manana faharanitan-tsaina izay mahatonga azy ireo hankafizina, fa tsy dia tena tiana loatra no antsoin'i Yamada hoe “maherifon'ny Asperger” ary misongadina tsy tapaka ao amin'ny manga sy ny sarimiaina Japoney. Araka ilay endrika, azo leferina ny tsy fananan'ilay maherifo fihetseham-po satria (tondroina matetika ho zatovolahy izy ary) manana karazana ” fahaiza-manao mahagaga” izy. Ohatra iray malaza ny mpandray anjara ‘L’ ao amin'ny Death Note , polisy mpitsongodia iray izay hentitra sy kinga amin'ny fanenjehana ny andiana mpamono olona fantatra amin'ny hoe ‘Kira’. Raha matanjaka miaraka amin'ny volo mainty mikorontan-dava, angamba i L no tena maherifon'ny Asperger tonga lafatra . Azo leferina ny tsy fananany fifandraisana ara-tsosialy satria mahafapo ny asany.
Tsy voafetra ao Japana ny endriky ny olona miavaka “manana ny herim-po Aspergers”. Araka an'i Yamada, ohatra amin'ny fanehoana ny mpandray anjara toy izany ny tantara ao amin'ny BBC Sherlock lalaovin'i Benedict Cumberbatch sy Martin Freeman milalao an'i Watson namany akaiky:
Ohatra, misy ilay mpitsongodia Sherlock Holmes, izay efa nitsangana tamin'ny maty tao amin'ny andian-tantara malaza ankehitriny ao amin'ny fahitalavitra BBC … mampiseho ny tenany ho “tantaran'ny mpinamana” ny aretin'i Asperger. Misy mpandray anjara mahafinaritra iray izay manao izany zavatra rehetra izany ary miseho ho olona “salama tsara” iray mijoro eo akaikiny. Ohatra iray tonga lafatra amin'izany i “Sherlock” .
Ny fampiasana ny “Aspie”, ho toy ny tenin-jatovo ao Japana
Ny lohatenin'ny Niconico izay nahitana ny antsafan'i Yamada dia ny hoe “Raha Jerena hoe Nahoana Isika No Tia Ireo Mpandray Anjara ‘Aspies’ Na Manana Fikorontanana amin'ny Fivelarantsaina ” (Asupe Ya Hattatsu Shogai No Shujinko Ga Ai Sareru Riyu Wo Kangaete Mita, アスペや発達障害の主人公が愛される理由を考えてみた).
Mampiasa ny tenin-jatovo Japoney milaza ny Aspergers ho asupe ny lahatsoratra Niconico izay adika tsotra avy amin'ny teny Anglisy hoe “aspie“, ary midika hoe olona iray maneho ny toetra mampiavaka ny aretin'i Asperger. Mampiasa ny teny Japoney ara-pitsaboana kokoa “aretina Asper ” (アスペルガー症候群) i Yamada .
Ao Japana ny teny hoe “asupe” (アスペ ) dia fantatra ho teny fanompana ary matetika hitarina mba ahitana olona izay manao fihetsika tsy mitovy amin'ny maro an'isa, na tahaka ny “hafahafa”.
Ohatra, mampiasa ny asupe ny mpisera Twitter iray mba hanaovany fanamarihana manivaiva momba ny tarika mpihira tanora AKB48 Ozono Momoko:
Tahaka ny asupe ny tarehiny .
Vao haingana no tsikaritry ny Korea Times ity lamaodin'ny Aterineto ao Japana ity :
Mampiasa ny teny hoe “asupe” ny mpisera Japoney eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 30 taona mba hilazana ny olona manana fahasembanana ara-tsaina na “ireo manana fihetsika tsy mitovy amin'ny maro an'isa.”
Mitanisa ireo fiteny japoney avy amin'ilay mpitsabo aretin-tsaina Japoney Hoshino Geinan ny lahatsoratra tao amin'ny Korea Times . Raha nanoratra isan-kerinandro tao amin'ny gazetiboky Bunshun ao Japana tamin'ny volana Aprily, dia nanoratra momba ny fampiasana ny teny hoe asupe, toa hita fa mamaly ny tenin'i Yamada i Hoshino eto:
Raha tsorina, dia tsy tokony hiteny na amin'iza na amin'iza hoe “asupe ianao” . Ny antony dia satria, na dia ny dokotera manam-pahaizana manana traikefa manokana amin'ny psikolojia aza dia tsy maintsy matoky tanteraka ny tenany alohan'ny ilazana fahitana ny aretin'i Asperger tamin'ny fitiliana ara-pitsaboana. Koa satria sarotra ny manao fitiliana ny zava-misy dia mety handiso ny fitiliana ny milaza fotsiny ny olona iray ho asupe .
Nanoratra tamin'ny fanakianana ihany koa i Hoshino tamin'ny fampiasana ny teny rehefa manivaiva olona:
Manontany tena aho hoe moa ve ho faly (ireo olona miaina amin'ny aretina Aspergers) rehefa mihaino ny teny hoe asupe ampiasaina ho tenin-jatovo? Eny fa na dia lazaina ao anatin'ny vazivazy malefaka aza ny hoe “asupe tanteraka ianao ” amin'ny olona izay mety ho voan'ny aretina Asperger dia mety hanafintohina ny hafa ny mihaino izany.